Mentzọ ịkwụ ụgwọ - ASFO Store
Na "Gaba n'ihu maka ndenye ọpụpụ", ị nwere ike ịhọrọ otu n'ime usoro ndị a na nhọrọ "Paymentkwụ "gwọ":
Akwụkwọ ntụnye Cash Cash
(Kwụrụ maka maka azụmaahịa ọ bụla emere na www.asfo.store.
Mgbe ịjupụtasịrị usoro iji, aga-eweghachi gị gaa na akwụkwọ ịkwụ ụgwọ. Na ya, a ga-egosi ike nke onyinye gị, akwụkwọ maka ọnụahịa ya. A ga-ezipụ gị iwu ozugbo anyị nwetara nkwenye ịkwụ ụgwọ.
A na-amara gị ozugbo mgbe ịkwụ ụgwọ, yabụ na ịgaghị ezitere anyị akwụkwọ nkwado ọ bụla.
Bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, egbula oge ịkpọtụrụ anyị site na Ọrụ Nkwado Ndị Ahịa anyị ma ọ bụ site na email na contact@asfo.store.
Ọ bụrụ na ịhọrọ nhọrọ kaadị akwụmụgwọ (VISA ma ọ bụ MASTERCARD), a ga-atụgharị gị na njikọ nchekwa maka anyị iji nweta ikike HiPay.
A ga-arịọ gị ka onye nwe kaadị eji, ụbọchị ngwụcha na koodu nche, nke dị n'akụkụ aka nri nke kaadị mbinye aka na azụ kaadị ahụ ma ọnụọgụ atọ họpụtara CVV (koodu nyocha). Iji mee ka Shoppingzụ ahịa gị dị nchebe, anyị chọrọ na, mgbe ị na-eji kaadị E Si Nweta, itinye ihe nọmba koodu 3 ma ọ bụ 4 (CVV). Dika koodu bụ akụkụ nke kaadi onwe ya, a na-egbochi nnwale ọ bụla nke aghụghọ. Paymentdị ịkwụ ụgwọ a gụnyere ego agbakwunyere ma na-agbakwunye 1.6% na uru ọnụ ego nke ịtụ.
Paymentzọ ịkwụ ụgwọ a dị naanị maka Nnyefe Iwu nke ọgwụ ma ọ bụ bụrụ na ibi na Maia District ma tinye ihe ndị na-abụghị ọgwụ na ụgbọ ibu gị.
Ọnụ ego Cashpoint / Isi-ere-ere
Mgbe ọ bụla ị họọrọ usoro ịkwụ ụgwọ a, onye na-ebugharị ya nwere ọnụ ahịa ire ere ka ị wee nwee ike ịkwụ ụgwọ iwu gị n'oge nnyefe.
Bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, egbula oge ịkpọtụrụ Ọrụ Nkwado Ndị Ahịa anyị.
Mgbe ọ bụla ị họọrọ usoro ịkwụ ụgwọ a, nwoke na-ebubata ya nwere mgbanwe nke na, na ịnweghị ezigbo ego iji kwụọ ụgwọ, ọ ga - ekwe omume ịme ya n'oge nnyefe.
Formsdị ịtụ, akwụkwọ ọnụahịa na nnata.
Dọkụmentị wepụtara site na webụsaịtị wee zite ozi na ntanetị na-akpaghị aka enweghị uru ego ọ bụla, mana ha na-arụ ọrụ dị ka akwụkwọ nkwado nke idobere iwu ma ọ bụ ọnọdụ ndị a dị. Ọzọkwa, akwụkwọ ndị HiPay nyere na-akwụ ụgwọ enweghị ego ndekọ ego ọ bụla. A na-enye akwụkwọ mbata na akwụkwọ ọnụ ahịa ọnụ ahịa ego ego sitere na ngwanrọ anyị wee zipụ ozi gị ma ọ bụ nyefee ya maka ịtụtụ ego.
Maka nkọwa ma ọ bụ ntụnye ọ bụla, kpọtụrụ anyị.